Weli ma maqashay ayada oo laga hadlaayo tiro ka yar eber? Waxaa dhici karta in aad marar badan aragtay tiro ka yar eber, adiga oo aan ka fikirin.
Haddii uu qofku yahay mid lacag lagu leeyahay ama haddii uu heerkulka dibeddu yahay mid aad u qabow waxaa markaasi qasab nagu ah in aan isticmaalno tiro ka yar eber. Waxaana tiradaasi aan ku magacaabi karnaa Tirooyinka taban. Tiro taban waa tiro ka yar eber.
Waxaa jira xaalado badan oo aad nolol maalmeedka kula kulanto tirooyinka taban:
Tusaalaha ugu caansan oo weliba ah mid ku habboon cimilada qabow ee Sweden waa qalabka lagu cabiro heerkulka hawada. Marka hawadu ay qabow dahay heerkulku wuxuu noqonayaa mid taban, oo macnaheedu yahay in heerkulku ka hooseeyo eber, 0.
Joqoraafi ahaan, dhererka buuraha waxaa lagu saleeyaa Joog-badeedka, ayada oo la yiraahdo joog-badeedka oogada badda waa 0 (eber). Tusaale ahaan, khubuuraha Marriyaan waxay badda ka hooseeyaan 1 000 m. Tusaale ahaan, buurta dunida ugu dheer, Mount Everest, waxay 8 848 m oo ka sarreysa badda.
Haddii uu qofku rabo in u wax iibsado, waxa uu lacag ka soo deynsadaa bangiga, markaas kadibna qofka waxaa lacagtaas ku leh bangiga. In bangigu qofkaas lacag ku leeyahay waxaa loo qoraa qaab tiro taban.
Haddii uu qofku telefoon u diraayo waddan fog waa in uu marka hore ogaadaa saacadaha waqti ahaan u dhexeeya labada waddan, ayada oo la tixraacaayo meesha uu dalkaasi jogoraafi ahaan ku yaalo. Tusaale ahaan magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxay hal saac ka horeysaa magaalada London. Magaalada Dubeey waxay saddex saacadood ka horeysaa Stockholm.